I-4 intshi yebhobho yokuhlambela i-Chrome
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / WOWOW 4 Inch Centerset single-Handle Igumbi lokuhlambela iBhobho yethumbu kwiChannel
I-WowOW 4 intshi ye-intshi ye-Bath-Bath ye-faucet enye kwi-Chrome
Ukuseta ngokulula: le faucet yokuhlambela yokuhlambela yenzelwe ukutshatisa 3-umngxunya, 4-in. Ukucwangciswa kweseti
Ukudityaniswa kwendibano kufakiwe: indibano ye-pop-up kwisiphelo sokulungelelanisa ifakwe ngesandla ukugqiba imbonakalo yakho.
2320700C imiyalelo yokufaka
Umbhobho wokuhlambela we-Chrome 2320700C
Isikhephe esenziwe kakuhle segumbi lokuhlambela se-WOWOW sinika ukubonakala okubengezelayo kwigumbi lokuhlambela. Le faucet yegumbi lokucoca i-chrome inefashoni yoyilo ye-retro. Iya kunika umthelela omangalisayo kwigumbi lokuhlambela lakho, kulo naluphi na uhlobo lokuhlala. Le faucet yegumbi lokuhlambela le-chrome inokufakwa kwindlu yokurenta, i-condo entsha, igumbi elinye, i-motor khaya, i-bungalow, i-trailer yokuhamba, okanye indlu enkulu. Isikhuseli se-chrome kwigumbi lokuhlambela elinomgangatho ogqityiweyo esifana nokugqitywa kwesibhakabhaka esibonakalisa ukukhanya phantse kuyo nayiphi na igumbi lokuhlambela. Ukugqitywa kwe-chrome kubonakaliswe kakhulu ukukunika imbonakalo ebengezelayo edibanisa kakuhle nayo nayiphi na isitayile segumbi lokuhlambela. Xa ijika ijikajika yongeza umdibaniso weklasi kodwa okwangoku ukuya kwigumbi lokuhlambela.
Isikhuseli esinye se-chrome yokuhlambela isitovu sinika indlela elula yokuhambisa isiphatho ngasemva-kwaye-kwaye-phezulu- nangaphantsi-kakuhle. Ngale ndlela unokulawula umthamo wamanzi kunye nobushushu ngokulula ngesandla esinye. Kwenza ukuba kube lula ukuthoba kancinci ukuhamba kwamanzi ngokufanelekileyo ngokweemfuno zakho ezithile. Uya kumangaliswa ngokulula kokuhamba kwamanzi okunokulawulwa.
Izixhobo ezikumgangatho ophezulu zetafile yokuhlambela yegumbi lokuhlambela
Isikhenkcu sokuhlambela segumbi lokuhlambela le-WOWOW saveliswa nge-zinc alloy, saza sagqitywa ngesandla esenziwe ngemisonto ecociweyo nesilayidiweyo. I-WOWOW isebenzisa ubuchwepheshe be-state-of-the-art-ukuqinisekisa zombini ubuhle obungenasiphelo kunye nokuqina okungapheliyo. I-ceramic ivalve umzekelo ubonelela ngokusebenza-ngaphandle kokudonsa ukuze ujike kakuhle. Ikhaphethi yomgangatho ophezulu we-ceramic kwelinye icala udlulile kuvavanyo ngomjikelo wamanzi ongaphezulu kwe-500,000. Kwaye itawuli yokuya kwigumbi lokuhlambela le-chrome yayisenza ngokufanelekileyo emva kwazo zonke ezi mvavanyo. I-WOWOW ngenxa yoko igqitha yonke imigangatho yobomi ixesha elide kumveliso ngokuqina.
Ngaphandle kokuqina, kulungile ukuba wazi ukuba namanzi acocekileyo kwaye ngamaxesha onke. Ngenxa yesinyithi esikhulu esisetyenzisiweyo, uyakufumana amanzi angakhokeli maxa onke. Oku kuyakukhusela impilo yakho kunye nosapho lwakho ngonaphakade. Ukuphuculwa kwesikhenkcu segumbi lokuhlambela le-ChOW le WOWOW ayisiyi kuba yinto emnandi kuphela kwigumbi lokuhlambela, iya kuba lukhetho olufanelekileyo ngokunjalo!
Indawo yokuhlambela yegumbi lokuhlambela ifenitshala
Isikhuselo sokuhlambela segumbi lokuhlambela elinokubekwa ngokulula sinokufakwa nguwe. Lo mthi wokuhombisa ophetywe ngegumbi lokuhlambela le-chrome ulungele ukufakelwa iziko le-intshi ezi-4. Umgama phakathi kwetawuli kunye nezibambo zi-3 inches. Ngazo zonke izinto kunye nezinto zendibano, le fektri yegumbi lokuhlambela leChrome liza kukulungela ukufakelwa ngokwakho. Olu fakelo lwe-DIY luya kukugcinela iindleko ezongeziweyo zeplanethi ebizayo. Kwaye akukho mfuneko konke konke. Uyilo lwayo olwenziwayo lubangela ukuba i-novice ifake le faucet yegumbi lokuhlambela ngemizuzu nje engama-4. Ikhithi yokufakelwa iza kunye neiglavu zokufakelwa zokuhambelana. Ngale ndlela awuyi kuzonakalisa izandla zakho ngengozi xa ufaka itafile yokuhlamba yegumbi lokuhlambela. Nceda uqaphele ukuba imigca yokubonelela ayifakwanga ukuba uyayifuna, kwaye ithengiswa ngokwahlukeneyo.
Ukuphakama kwendawo yokuhlambela yeWoodow yegumbi lokuhlambela leentshukumo zizi-intshi ezi-2.7 kunye nokufikelelwa kwesiqu esiziimitha ezi-4.2. Isicoci segumbi lokuhlambela linye silingana nofakelo oluqhelekileyo lwe-intshi ezi-4. Ngaphandle koko, igumbi lokuhlambela le-chrome yeklasikhi liza kunye nesithintelo se pop pop kubandakanya nentonga yokuhlanganisa enyukayo. Isikhenkci sokuhlambela se-chrome sidibanisa kakuhle kunye nendibano yokuntywila ye-chrome. Zenza ubunye obunokulingana kwigumbi lokugezela lakho. Ungawavumela ngokulula amanzi ukuba aphume kwigumbi lokuhlambela ngokucinezela phantsi kwentonga. Ukusebenza lula kokuphatha intonga yokunyusa, kukukhusela ekonzakaliseni izandla zakho ngelixa uzihlamba. Uyilo lweentonga zokutsala lwalungiselelwe ukwenza ubomi bakho bube bococekileyo ngakumbi kwaye bube lula.
Isikhuselo sokuhlambela segumbi lokuhlambela
Isixhobo esisebenzisayo se-ABS sigcina ngaphezulu kwe-50% yamanzi. Ilawula umjelo wamanzi ngokunikezela ngokuchasene noxinzelelo kumjelo wamanzi. Oku kukhokelela kumjelo wamanzi a-splatter, kwaye kukugcina ngokungummangaliso kwityala lakho lamanzi. Kuxhomekeka kwindawo okuyo, ityala lakho lamanzi linokongeza ngokulula. Ke kubalulekile ukuba wazi ukuba unokugcina kwiindleko zamanzi, ngaphandle kokuphulukana nomsebenzi. Awuyi kuqaphela umohluko kuba amava akho amanzi aya kuthi aphucuke ngenxa yento ekuchasayo splatter.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Neoperl aerator kukubonelela ngamava okuhlamba okuhlamba. Ngokuchukumisa ngobumnwe ngeminwe yakho, unokuzisusa ngokulula zonke iintsalela zamanzi anzima njengecalcium. Ngale ndlela unokugcina isikulufu sakho sokuhlambela segumbi lokutsha njengento entsha kwaye sisebenza ngokugqibeleleyo. I-aerator yegumbi lokuhlambela le-chrome inokususwa ngokulula ngezandla. Awudingi nasiphi na isixhobo sokususa i-aerator njengoko unokususa ngokulula eli nqaku. Ungayisusa i-aerator nokuba ungayicoca okanye uyitshintshe.
Isikhuselo sokuhlambela esingenamngcipheko we-chrome kwigumbi lokuhlambela
Ngexesha layo lewaranti leminyaka emi-3, i-WOWOW ibonisa ukuzithemba kwayo kumbhobho wayo wokuhlamba we-chrome. Ngeli faucet yegumbi lokuhlambela ekumgangatho ophezulu unexabiso elifanelekileyo lemali onokulufumana kwimarike. Izinto ezikumgangatho ophezulu azicelwanga mngeni, kwaye ngokwemali etyalomali ixabiso liphantsi ngendlela elinokufumana ngayo. Ngenxa yoko, i-WOWOW iqinisekisa ukuba awuzukufumana umpompo osemgangathweni wokuhlambela ngexabiso elifanayo. Kananjalo awuyi kulufumana olu hlobo lwempompo esemgangathweni yokuhlambela ngexabiso eliphantsi. Ngenxa yomgangatho ophakamileyo, u-WOWOW akoyiki ukunikezela ngesiqinisekiso seminyaka emi-3. Indawo yakho yokugcina amanzi ye-chrome iya kubuyiselwa endaweni entsha kraca ukuba iza konakala ngenxa yesizathu esithile.
Ungayithenga itampu ye-WOWOW's chrome yokuhlambela ngaphandle komngcipheko kwaphela. Ufumana isiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90. Ukuba ngekhe kwenzeke ukuba waneliseke yi-100% ngepompo yakho yokuhlambela entsha yeWOWOW, uza kufumana imbuyekezo epheleleyo. Ngaphandle kwemibuzo ebuziweyo, kanjalo nje. Kodwa siqinisekile ukuba awuyi kuyibuyisa itompu yakho, njengoko sinabathengi abonelisekileyo nababuya kwilizwe lonke. Siqinisekile ukuba uyakuqiniseka ngexabiso lemali esikunika yona.
• Uyilo lwe-chrome ebengezelayo
• Ngomatshini wokutsala umsila wokuphelisa umsimelelo
• Yenziwe ngezixhobo ze-alloy ezisemgangathweni eziphezulu
I-SKU: 2320700C iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo tags: 4 intshi, indawo esembindini, Isandla esisodwa